Computer Technical Notes & Sharing Softwares: June 2011
Apple vs Microsoft battle continues who will come first??acomparision
How to know which iPhone 5/4s new features are true and which are rumours?(infographia)
Posted by SLIP at 6:30 AM0comments
There are many small business owners doing ecommerce online who are struggling, trying to increase their top page rank ratings. This is very time consuming and expensive. A lot of ecommerce businesses do not haveabudget to allow them to take advantage of link buying, or other endeavors to increase the page rank ratings they need to make the money the big guns do.
How do you buildawebsite from PR0 to PR2?
Here are some helpful hints that will work for you to getatop page rank on Google.
Getaprivate domain name. This is essential in this business. Be online forafew months. Make sure you change your content regularly, at least onceaweek. Have at least fifty inbound links that work.
This next step is tricky but not difficult. Have between 50 to 100 plus articles on your site. Submit your website to all of the necessary directories. Begin to link your website in the forums. Becomeamember of Google’s PayPerClick Program. Google will welcome you with open arms. You invest twenty dollars to join Google’s PPC program once. Done correctly, you will get back this small investment withinafew short months.
It isawonderful idea to make friends with Google. It is the number one search engine right now. Google’s index spiders search the internet, finding sites to rank them against relevance. This takes some time for the spiders to do their job, sometimes up to several months, so have patience because it will takeafew months for your site to get indexed.
Google’s spider can become confused if you do not use the correct keywords to optimize your site. Make sure you use the correct keywords and keyword phrases to describe what your website is all about, otherwise those nasty spiders will run and hide. In fact, they may not see your site again for another few months. So get the keywords right and your site reflects those keywords.
A page rank of5can be reached by generating at least 10,000 links. This sounds daunting but it is not impossible. When you have 200 pages of content with each page having thirty or more links to other pages, those inside links will generate 6,000. Google’s spider will count the links inside the site because the size of your website is just as important as the links inside of it. This is especially valid when all of your website?s content is alike.
This method will work for you, but you will have to be patient and allow some time to pass. Give itafew months, then begin checking at Google to see where your page rank is. From here, you will haveagood idea inafew weeks if it is moving up, or down in page rank. If it is moving down, then you need to tweak your site, or adjust the keywords and keyword phrases.
The competition for page rank in Google is stiff. There are other search engines to use. In order to find out how the other engines page rank, you will need to go to their sites and garner all the information that is available, then look online for tips and tricks to manipulate these engines to your advantage.
Posted by SLIP at 4:28 PM0comments
2. Guest2admin.bat ဖိုင်ကို Double click လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီး နောက်ပိုင်းဖြစ်တာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်းစမ်းကြည့် လက်တွေ့သိပါမည်။
Posted by SLIP at 9:10 AM0comments
Gtalk&Gmail အကောင့် password များ မေ့နေလျှင်(သို့)အခိုးခံရလျှင် ပြည်လည်ရယူနည်း
1။ ဂျီတော့ ဘောက်စ့်လေးထဲမှာရှိတဲ့ Forgot your password? ကိုနှိပ်လ်ိုက်ပါ။
2။ username & email လိပ်စာကိုဖြည့်ပြီး submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
3။ ပေးထားတဲ့ စာလုံးစောင်းလေးတွေကို မှန်အောင်ဖြည့်ပြီး continue ကိုနှိပ်ပါ။
4။ Answer my security question ရှေ့က အ၀ိုင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
5။ အကောင့်ဖွင့်စဉ်က မိမိဖြေထားသော အဖြေကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
6။ ပေးထားတဲ့ ကွက်လပ်2ခု ထဲမှာ password အသစ်ကို တူအောင်ဖြည့်ပြီး Reset Password ကိုနှိပ်လိုက်ပါက မိမိရဲ့ Gtalk&Gmail
အကောင့်များ ၄င်း password အသစ်ဖြင့် ၀င်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့် ဂျီမေးအခိုးခံလိုက်ရပြီဆိုပါတော့ ။ password ရော security question ရော secondary email ပါ အပြောင်းခံလိုက်ရပြီဆိုပါတော့။ သင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ဒီအတွက် မပူပါနဲ့။ ဂျီမေးက သင့်အတွက် service တခုပေးထားပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံး လော့အင်ဝင်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲ၊ အကောင့် စဖွင့်ခဲ့တဲ့ ရက်စွဲ၊ အဲဒီအကောင့်နဲ့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ Google ရဲ့အခြား products တွေအကြောင်း၊ Google Blogger အသုံးပြုရင် အဲဒီ Blogger Account ရဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်။
ဖောင်ပို့လျှင် တဖောင်သာ ပို့ရန် (ဖောင်အများကြီးမပို့ရန်)၊ ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကို အမြဲအသုံးပြုနေကြ စက်(PC) ကပဲပို့ရန်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ဖောင်ပို့လိုက်တဲ့ IP address ကို Google ကမှတ်သွားမှာမို့လို့ပါ။
ဒီ Form ပါမေးခွန်းများကိုသုံးပြီးတော့ ကိုယ့်အီးမေး သူများခိုးယူခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲ?။ လွယ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကိုလေ့လာပြီး ကိုယ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို
လုံခြုံတဲ့တနေရာ (ဥပမာ ကို Infofreakz အိမ်) မှာသိမ်းထားလိုက်ပေါ့။ နောက် အီးမေးအခိုးခံရတိုင်း အဲဒီအချက်အလက်အတိုင်းဖြေပြီး ပြန်ရအောင်ယူပေါ့။
Posted by SLIP at 3:02 PM0comments
မျှဝေချင်တဲ့ codec ကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုရင် terminal ထဲ Run လိုက်တာနဲ့ပြသနာနှစ်ခုလုံးဖြေရှင်း ပြီးသားဖြစ်သွားတာပါပဲ..
တစ်ခုချင်းစီသာဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေအတွက် ပြသနာမရှိပေမယ့် Beginners တွေ newby တွေအတွက်မှာတော့ တော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြသနာကြီးပါပဲ။ အလကားရတဲ့ gstreammer plugins တွေတောင်အင်စတောမတတ်ရင် တစ်ခုလုပ်ပြီးတာနဲ့ကျန်တာတွေပျောက်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံရတာတို့ အော်ဒီယိုအတွက်ဆိုလဲအာရုံတော်တော်နောက်ရတာမျိုးတို့ဖြစ်မှာပါ။
လိုအပ်သူအတွက်ကုဒ်တွေကတော့အောက်မှာသာ တိုက်ရိုက်ကော်ပီယူပြီး terminal ထဲ Run ထည့်လိုက်ပါ။
sudo wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get -f --yes --quiet --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get -f --quiet update && sudo apt-get -f install app-install-data-medibuntu apport-hooks-medibuntu && sudo apt-get update && sudo apt-get -f install ubuntu-restricted-extras
Posted by SLIP at 5:35 AM0comments
ဒီနေ့တင်တဲ့ပိုစ်လေးကတော့ဘလော့ဝါဿနာရှင်တွေအတွက် အရမ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့အခမဲ့EssentialToolsတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့မှာလိုအပ်တဲ့
ဝဘ်ဆိုက်ဒ်တွေပေါ့နော်။ ကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းမျော်လင့်ပါတယ်။ ဘလော့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျှက်ကေပီသရီးမိသားစု
1. Free Code Converter/Phraser
ဒါကတော့ phrase Adsense ad code နဲ့အခြားသော HTML/JAVA codesတွေကိုဘလော့ပေါ်မှာတင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
2. Free ClipArt
ဒီနေရာတွေမှာအခမဲ့ clip art images တွေကိုရှာပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
3. Icons for RSS Feeds
RSS feed အတွင် Icon လေးတွေယူသုံးချင်ရင်။
4. Free Image Watermark
မိမိရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို online ကနေပြီးအမျိုးမျိုးပြုပြင်ချင်ရင်။
ဒါကတော့ဘလော့နဲ့ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အတွက် favicon လုပ်ရင်ဆိုက်ဒကောင်းလေး။
3. http://www.degraeve.com/favicon/ (It creates,edit and generate the favicon)
6. Free HTML Tutorial
အကောင်းဆုံး HTML ကုဒ်တွေကိုလွယ်ကူစွာသင်ယူချင်ရင်.
7. Online Free File Storage
ဒါလေးကတော့ Online ပေါ်မှာမိမိရဲ့ Fileတွေကိုသိမ်းထားချင်ရင်ပေါ့နော်။
1. http://filefactory.com/ (free up to 300MB)
2. http://skydrive.live.com/ (25GB)
3. https://www.box.net/ (1GB)
8. HTML Color code picker
ဒါကတော့ HTML value ofaspecific color တွေပေါ့်နော်
9. Reveal exact color of HTML color code
အခြားတော့ HTML color code e.g. #CCCCCC တွေကိုရနိုင်ပါတယ်။
10. Social Bookmarking and Sharing
ဒါလေးကတော့add social bookmarking နဲ့ sharing icons အတွက်ပါ။
11. Free website statistics
12. Free buttons and logo's
လှလှပပ Buttons တွေနဲ့ Logo တွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဆိုက်ဒ်ကောင်းလေးပါ။
Posted by SLIP at 5:30 AM0comments
click photo, to see large size
Posted by SLIP at 10:09 AM0comments
မိမိကွန်ပျူတာထဲမှာ ထရိုဂျန် (Trojan) ဒါမှမဟုတ် ဟက်ကာတစ်ယောက်ယောက် ဝင်ရောက်နေမှု ရှိမရှိ အလွယ်တကူရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းကောင်းတစ်ခုကို အိုင်တီ ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာမှာ ထရိုဂျန်လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟက်ကာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ရောက် နေပြီဆိုရင် စက်ဟာ နှေးကွေးလာပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထရိုဂျန်တွေ၊ ဟက်ကာတွေက မိမိကွန်ပျူတာကနေ မိမိရောက်လိုတဲ့ ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ်) ဆာဗာတွေဆီကို အင်တာနက်ကနေ လှမ်းပြီး ချိတ်ဆက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by SLIP at 2:14 AM0comments
Posted by SLIP at 2:10 AM0comments
Online တွင် မိမိအကောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အဆင့် (၁၀) ဆင့်
၁) မိမိ ဖွင့်သော Website သည် Official Site ဖြစ်ရန် အွန်လိုင်းမှာ တစ်ချို့သော Website တွေက လာရောက်လည်ပတ်သူကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ malicious code တွေ / virus တွေကို မြှပ်နှံ့ထားတတ်ပါတယ်.. ဒါကလည်း search engine နဲ့ အချို့သော Social Site တွေကနေ ၀င်လာတဲ့ Link တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိအသုံးပြုတဲ့ website က Official Site ဖြစ်မှသာ ပိုပြီးစိတ်ချရပါတယ်။ Official Site မှာကော malicious code တွေထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ Webmaster က အဲလိုလုပ်ရင် တရားစွဲခံနေရမှာပေါ့။ freehosting နဲ့ တစ်ချို့ unofficial site တွေဆိုရင် ၄င်း site က မိမိကိုဒုက္ခပေးလို့ ဘယ်သူ့ တရားစွဲရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့က password ကို ၄င်းတို့ရဲ့ name ပေးတယ်။ တစ်ချိုက name နဲ့မွေးသက္ကရာစ်ပေါင်းပေးတယ်။ နောက်တစ်ခုက keyboard က အစဉ်လိုက်ကိုပေးခြင်းပါ .. asdf123 , qwerty, နဲ့ name + 12345 စသည့်ပေးကြတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက dictionary ကစာသားပါ။ password ပေးတော့မယ်ဆိုရင် dictionary ထဲက စာသားကို ဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့.. တစ်ချိုက lover, flower, angel, arsenal စသည့်ဖြင့်ပေးကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး password တွေကို ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတာတာ ၀ါရင့်နေတဲ့သူက ခန့်မှန်းပြီး ရယူသွားနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ Password အတွက် လွယ်ကူစွာပဲ bruteforce လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက် တစ်ချို့က ၄င်းတို့ရဲ့ Password ကို အမြဲတမ်းအသေထားတတ်ကြတယ် ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်အထိပေါ့။ တကယ်တမ်းက ဒီလို Password ကိုခဏခဏ ပြောင်းသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ မိမိက အများသူငှာသုံးတဲ့ Cyber & Hot spot လိုနေရာမျိုးမှာသုံးမယ်ဆိုရင် သတိထားရပါတယ်။ Banking & Online Transaction တွေဆိုရင်လုံးဝကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။ မိမိကွန်ပျူတာတွင်ပဲသုံးပါ။ အကယ်၍ plublic နေရာတွေမှာသုံးခဲ့ရင် auto complete သို့မဟုတ် save password ဆိုတဲ့ web browser ကမေးတာကို no နဲ့သာဖြေပါ။
အသုံးပြုပြီးပါက IE ဆိုရင် Tools > Internet Options > Content > AutoComplete. Uncheck option “User names and passwords on forms” and click on “Clear Password”. Click “OK" လုပ်ပါ။ FireFox ဆိုရင် Clear Recent History or Clear Private Data ကိုလုပ်ပါ။ မိမိရဲ့ သုံးနေသောကွန်ပျူတာတွင် မည်သည့်
ဟက်ကင်း software မှမရှိအောင်ကြည့်ပါ။
၆) မိမိကွန်ပျူတာတွင်း Firewall, Antivirus, Antispyware ကိုထည့်ထားပါ။
Firewall, Antivirus, Antispyware ကိုထည့်၍ အမြဲတမ်း Update လုပ်ပေးပါ။ မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာကို Scan ပုံမှန်ဖတ်ပါ။
၈) မိမိရဲ့ အကောင့်ကို စောင့်ကြည့်ရေး
ဆိုလိုတာက အကယ်၍ Gtalk သာသုံးမယ်ဆိုရင် မိမိအကောင့်ကိုဘယ်ဆီက လာသုံးတယ်ဆိုတာကို စစ်ဖို့ Last Activity on this account ဆိုတာပါပါတယ်.. ဒီလိုစစ်ခြင်းဖြင့် တစ်ခြားဘယ် IP ကလာသုံးသွားတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မိမိရဲ့ Inbox / Outbox တွေကို စစ်ပါ ။ ထူးခြားတဲ့ အရိပ်အရောင်တွေ့က password ကိုပြောင်းပါ။
၁၀) နောက်ဆုံး ကွန်ပျူတာ နှင့် အင်တာနက် သတင်းကို စောင့်ကြည့်ပါ
Posted by SLIP at 4:52 PM0comments
‘CSS Rule Definition for #menu’ Box ကျလာရင် အောက်ကအတိုင်း ဖြည့်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် Title ရှိ ‘Untitled Document’ နေရာတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် အမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမှာ BusinessSite Home Page လို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် အပေါ်ပုံတွင် အမဲဖြင့်ပြထားသော Content နေရာတွင် စာမျက်နှာတွင် မိမိရေးချင်သည့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် Post တစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါ။ Post တွင် ခေါင်းစဉ်ပါအောင်တော့ရေးပါ။ ထိုရေးထားသော စာများသည် Browser ပေါ်တွင် မြင်တွေ့ရမည့်စာများဖြစ်ပါသည်။
Posted by SLIP at 5:27 AM 1 comments